October 2019 - Business Centric Network (BCN)
Special Accounts (Gift Card) @ MSMEBooks
October 31, 2019 BCN Support
Special Accounts ကို Customerများအား Gift Card များပေးရာတွင်အသုံးပြုမည်ဆိုပါက... Settings ကိုနှိပ်ပါ။ Non-inventory Items ကိုနှိပ်ပါ။ New Non-inventory Item ကိုနှိပ်ပါ။ Item Code တွင် ထည့်သွင်းလိုသော Code နံပါတ်ကိုထည့်သွင်းပါ။ Item Name တွင် ထည့်သွင်းလိုသော item အမည်ကိုထည့်သွင်းပါ။ Unit ထည့်သွင်းပါ။ Tracking Code တွင်သက်ဆိုင်ရာ Tracking Code ကိုရွေးချယ်ပါ။ "This item can be purchased" နှင့် "This item can be sold" တွင် သက်ဆိုင်ရာစာရင်းကို ရွေးချယ်ပါ။ Create ကိုနှိပ်ပါ။ ထည့်သွင်းထားသော item ကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။… Continue reading Special Accounts (Gift Card) @ MSMEBooks
Capital စာရင်းများထည့်သွင်းခြင်း @ MSME Books
October 13, 2019 October 13, 2019 BCN Support
လုပ်ငန်းတွင် ရင်းနှီးမြှပ်နှံထားသည့် Shareholder List (ရှယ်ယာရှင်စာရင်းများ) နှင့် ထည့်ဝင်ထားသည် Capital Investment (ငွေပမာဏ) များကို Capital Accounts တွင် ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။ Shareholder Listစာရင်းများထည့်သွင်းရန်အတွက် "Capital Accounts" ကိုနှိပ်ပါ။ “New Capital Account” ကို နှိပ်ပါ။ “Name”တွင် လုပ်ငန်းတွင် ရှယ်ယာထည့်ဝင်ထားသူအမည်ထည့်ပါ။ “Create” ကိုနှိပ်ပါ။ ထည့်သွင်းထားသော အစုရှင်အမည်အားတွေ့ရပါမည်။ အစုရှင်များအား ထပ်မံထည့်သွင်းလိုပါက အထက်ပါအတိုင်းထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။ ရှယ်ယာရှင်တစ်ဦးချင်းစီမှ လုပ်ငန်းသို့ထည့်ဝင်ငွေစာရင်းသွင်းရန်အတွက် "Receipt & Payment" ကိုနှိပ်ပါ။ "New Receipt" ကိုနှိပ်ပါ။ "Date" တွင် ငွေလက်ခံသည့်နေ့အားရွေးချယ်ပါ။ "Account" တွင် ငွေလက်ခံသည့် စာရင်းအမည်အားရွေးချယ်ပါ။ "Payeer" ၊ “Description”… Continue reading Capital စာရင်းများထည့်သွင်းခြင်း @ MSME Books
Tagged Capital, Shareholder ListLeaveacomment
Credit Note @ MSME Books
October 7, 2019 BCN Support
ရောင်းပြီးသည့် ကုန်ပစ္စည်းများအား အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဝယ်သူမှပြန်ပို့သည်ကို လက်ခံသည့် အခါတွင် Credit Note ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Credit Note စာရင်းသွင်းရန် Sale Invoices ကိုနှိပ်ပါ။ Sale invoice ပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းပြန်ပို့သော Customer ကိုရှာပါ။ ရှာတွေ့ပါက View ကိုနှိပ်ပါ။ ကုန်ပစ္စည်းပြန်ပို့လိုက်သော Customer ၏အရောင်းပြေစာပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။ ထိုSale Invoice ၏အပေါ်တွင်ရှိသော မြှားအစက်လေးပါသော Copy ကိုနှိပ်ပါ။New Credit Note ကိုထပ်မံနှိပ်ပါ။ New Credit Note ပေါ်လာမည်။Customer မှပြန်ပို့လာသောကုန်ပစ္စည်းကိုချန်ထားပြီး ကျန်ကုန်ပစ္စည်းများကို Tracking Codeဘေးရှိအမှားနှိပ်၍ဖြတ်ပါ။ ဝယ်သူဖောက်သည်မှ ပြန်လည်ပို့လာသောကုန်ပစ္စည်းအရေအတွက်ကိုQty တွင်ထည့်သွင်းပြီးပါက Create ကိုနှိပ်ပါ။ Credit Note တစ်စောင်ကျလာမည်ဖြစ်သည်။ Customer… Continue reading Credit Note @ MSME Books
Tagged Credit NotesLeaveacomment
Expense Claims @ MSME Books
October 6, 2019 October 6, 2019 BCN Support
လုပ်ငန်းသုံးကြိုတင်ငွေ ထုတ်ပေးခြင်းများ နှင့် စိုက်သုံးငွေများအား အသေးစိတ် စာရင်းသွင်းနိုင်ရန်အတွက် Expense Claims ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အသုံးစရိတ်ကြိုတင်တောင်းခံလွှာစာရင်းအားထည့်သွင်းခြင်းအားလုပ်ဆောင်ရန်... Settings များကို နှိပ်ပါ။ Expense Claim Payers ကိုနှိပ်ပါ။ New Expense Claim Payer ကိုနှိပ်ပါ။ Name တွင် Expense Claim Payer ၏အမည်ကို ထည့်သွင်းပါ။ Create ကို နှိပ်ပါ။ ထည့်သွင်းထားသော Expense Claim Payer ကို တွေ့မြင်ရမည်။ အသုံးစရိတ်တောင်းခံလာပါက Receipts & Paymentsမှ New Payment ကိုနှိပ်ပါ။ Date တွင် ငွေပေးချေသည့် Date ကိုထည့်ပါ။ Account တွင် ငွေထုတ်ပေးသည့်… Continue reading Expense Claims @ MSME Books
Tagged Expense ClaimsLeaveacomment
ဝန်ထမ်း လုပ်ခ/လစာပေးချေခြင်း (အတွဲလိုက်) @ MSME Books
October 5, 2019 October 5, 2019 BCN Support
ဝန်ထမ်းများအား လုပ်ခ/လစာ ပေးချေရာတွင် ဝန်ထမ်းတစ်ဦးချင်းစီအတွက် ငွေပေးချေနိုင်သကဲ့သို့ ဝန်ထမ်းလစာ အားလုံးကို ငွေပေးချေလွှာ တစ်စောင် ဖြင့် ပေးချင်ခြင်းကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ လုပ်ခ/လစာဖြတ်ပိုင်းများကိုနှိပ်ပါ။ လုပ်ခ/ လစာဖြတ်ပိုင်းအသစ်ကိုနှိပ်ပါ။ ရက်စွဲတွင် လစာ ပေးမည့် ရက်စွဲ ကို ထည့်သွင်းပါ။ ဝန်ထမ်းအမည်ကို ထည့်သွင်းပါ။ အကြောင်းအရာထည့်သွင်းပါ။ ရရှိငွေ၊ ဖြတ်တောက်ငွေ နှင့် လုပ်ငန်းမှ ထည့်ဝင်ငွေများကို ထည့်သွင်းပါ။ ဖန်တီးမည် ကို နှိပ်ပါ။ ထည့်သွင်းထားသော လုပ်ခ/လစာဖြတ်ပိုင်း ကို တွေ့ရမည်။ အခြား လုပ်ခ/လစာများကိုလည်း ထိုနည်းအတိုင်း ထည့်သွင်းပါ။ ထည့်သွင်းထားသော လုပ်ခ/လစာ ပြေစာများကို တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ လုပ်ခ/လစာများကို ငွေပေးချေမည်ဆိုပါက... ငွေလက်ခံလွှာများ နှင့် ငွေပေးချေလွှာ များကို နှိပ်ပါ။ ငွေပေးချေလွှာ အသစ်ကို… Continue reading ဝန်ထမ်း လုပ်ခ/လစာပေးချေခြင်း (အတွဲလိုက်) @ MSME Books
Chart of Accounts တည်ဆောက်နည်း @ MSME Books
October 3, 2019 BCN Support
လုပ်ငန်းတစ်ခု အတွက် စာရင်းပိုင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များထည့်သွင်းရန် အတွက် သင့်တော်သော စာရင်းခေါင်းစဉ်များကို ကြိုတင်သတ်မှတ်ပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ Chart of Accounts ထည့်သွင်းရာတွင် Balance Sheet Items နှင့် Profit and Loss Items ဟု နှစ်ပိုင်းခွဲခြားထည့်သွင်းရပါမည်။ Chart of Accounts များထည့်သွင်းရန်... Settings ကို နှိပ်ပါ။ Chart of Accounts ကိုနှိပ်ပါ။ Balance Sheet Balance Sheet အောက်တွင် New Group နှင့် New Account များသတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ Group များထည့်သွင်းရန်..New Group ကိုနှိပ်ပါ။ ဘဏ်နှင့် ဆိုင်သော Group ကို ထည့်သွင်းလိုပါက.. Name တွင် Bank ဟုထည့်သွင်းပါ။… Continue reading Chart of Accounts တည်ဆောက်နည်း @ MSME Books
Tagged Chart of AccountsLeaveacomment
Inventory Transfers @ MSME Books
October 2, 2019 BCN Support
လုပ်ငန်းတွင် ကုန်သိုလှောင်သည့် နေရာ တစ်ခုထက်ပိုရှိပါက Inventory Transfers ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Inventory Transfers အသုံးပြုရန်အတွက် Settings မှ Inventory locations တွင် အသုံးပြုမည့် Warehouse များကို ကြိုတင်သတ်မှတ်ပေးရပါမည်။ ကုန်စည်များအား တစ်နေရာမှ အခြား တစ်နေရာသို့ လွှဲပြောင်းလိုပါက... Inventory Transfers ကိုနှိပ်ပါ။ New Inventory Transfer ကိုနှိပ်ပါ။ Date တွင် ကုန်လွှဲပြောင်းသည့် ရက်စွဲကို သတ်မှတ်ပါ။ Description တွင် လွှဲပြောင်းသည့် အကြောင်းအရာကိုထည့်သွင်းပါ။ Item တွင် လွှဲပြောင်းမည့်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအမည်ကို ရွေးချယ်ပါ။ Qty ကို ထည့်သွင်းပါ။ Location များအား ရွေးချယ်ပါ။ Create ကိုနှိပ်ပါ။… Continue reading Inventory Transfers @ MSME Books
Tagged Inventory Transfer, Multi LocationLeaveacomment